က ဗျာ လမ်း သစ်
ကြယ်တွေဆီသွားမယ်.ခြေထောက်တွေဆိုတာ ရွှံ.စက်မပေမှာတော.သေချာတယ်..... မျိုးတေဇာမောင်
ငါ အီရတ်ကို သွားရမယ်။
Miss Ringdove 2
I've got to go to Iraq,
as the Allied Force go home,
those suicide bomber thugs
crush-wipe them out once and for all.
Posted by Myo Tayzar Maung at 3:29 AM No comments: Links to this post
ကိုယ့်ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ ကိုယ် အိပ်ပစ်လိုက်ကွယ်..
အတီးခံရတဲ့ ဗုံတွေရဲ့ ဂီတပါပဲ။
ပင်လယ်ကို ပစ်ပေါက် စိုက်ပျိုး နိုင်တယ်ဆိုတာ။
Posted by Myo Tayzar Maung at 6:23 AM No comments: Links to this post
Posted by Myo Tayzar Maung at 6:08 AM No comments: Links to this post
ဖော်ဝေး၏ အဘိဓမ္မာဝေဖန်ရေး ကဗျာတပုဒ်
ဆရာ ဒဂုန်တာရာက “အတတ်ပညာချို့ ယွင်းရင်ချို့ ယွင်းပစေ၊ အဘိဓမ္မာ မမဲ့စေနဲ့ ” ဆိုသည့် စကားကိုပြောခဲ့၏။ ထိုစဉ်က လူငယ် ကဗျာဆရာအများစုက ဒဂုန်တာရာ၏စကားကို သဘောတရားလမ်းညွန်ချက်အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုကာ “အဘိဓမ္မာသည် ပထမ၊ အတတ်ပညာသည် ဒုတိယ” အယူအဆအထိ တက်ကြွစွာလက်ခံ နာယူခဲ့ကြ၏။
မြန်မာကဗျာသမိုင်းတွင် ၁၉၅၀ ခုနှစ်တ၀ိုက်ကတည်းက ဖြစ်ပွားလာခဲ့သည့် လက်ဝဲ၊ လက်ျာ၊ အယူအဆရေးတိုက်ပွဲမှာ ၁၉၇၀ ခုနှစ်တ၀ိုက်တွင် အပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်လာခဲ့၏။ လက်ဝဲအယူအဆအခြေခံဖြင့် တင်ပြသည့် ဝေဖန်ရေးစာအုပ်များလည်း ထွက်ခဲ့၏။ တချို့ သော ကဗျာဆရာ၊ စာရေးဆရာများမှာ လက်ဝဲဝေဖန်ရေး လှိုင်းလုံးများအောက်တွင် ခေါင်းမဖေါ်နိူင်အောင် အဖိခံ ခဲ့ကြရ၏။
တနည်းအားဖြင့်ပြောရလျှင် ၁၉၇၀ နှင့် ၁၉၈၀ ခုနှစ်တ၀ိုက် မြန်မာကဗျာနယ်ပယ်တွင် လက်ဝဲ၀ါဒသည် အောင်ပွဲခံသည့် အယူဝါဒ တခုအဖြစ် ရပ်တည်နိူင်ခဲ့သည့် သဘောပင်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ သော အခြေအနေတွင် မော်ဒန်ကဗျာဆရာ ဖော်ဝေး သည်လည်း လက်ဝဲ၀ါဒကို သက်ဝင်ယုံကြည်သည့် ကဗျာဆရာတဦးအဖြစ်ထင်ရှား၏။
၁၉၇၀ ခုနှစ်ဝန်းကျင်က မိုးဝေစာပေ မဂ္ဂဇင်းတိုက်ထွက် လူငယ်ကဗျာဆရာများမှာ အုံနှင့်ကျင်းနှင့် အားကောင်းခဲ့ကြ၏။ ထိုကဗျာဆရာအားလုံးလိုလိုမှာ “မတ်က်စ်ဝါဒ” ကို ယုံကြည်သူ၊ ထောက်ခံသူများဖြစ်ကြ၏။သို့ မဟုတ် မတ်က်စ်ဝါဒ ကို စိတ်ဝင်စားသူ များဖြစ်ကြ၏။ ထိုကဗျာဆရာ အုပ်စုကြီးမှာ ၁၉၇၈ ခုနှစ်ဝန်းကျင်တွင်မူ အုပ်စု(၃)အုပ်စု ကွဲထွက်သွားခဲ့၏။ အုပ်စုကွဲသည်ဆိုသော်လည်း ဦးတည်ချက်ကွဲခြင်း မရှိဘဲ အတတ်ပညာပိုင်းတွင်သာ ကွဲခြင်းဖြစ်သည်။
ပထမအုပ်စုမှာ လက်ဝဲအလွန်အကျွံအုပ်စု ဖြစ်၏။ ဒုတိယအုပ်စုမှာ မော်ဒန်ကဗျာဆရာအုပ်စုဖြစ်၏။ တတိယအုပ်စုမှာ အရေ အတွက်အားဖြင့်လည်း အများစုဖြစ်ပြီး လက်ဝဲ အလွန်ကျွံလည်းမဟုတ်၊ မော်ဒန်ကဗျာဆရာ အုပ်စုလောက်အထိလည်း အတတ် ပညာကိုမြှင့်မတင်ဘဲ အလယ်အလတ်တွင် ရပ်နေ ကြသူများဖြစ်ကြ၏။ ထိုစဉ်က မိုးဝေကဗျာဆရာများ အားလုံး လိုလိုကို ခေတ်ပေါ် ကဗျာ ဆရာများအဖြစ် ခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြ၏။ ထိုအထဲကမှ အသိရခက်ခဲပြီး နမိတ်ပုံအသစ်၊ တင်ပြပုံအသစ် နှင့် ပိုမိုကျစ်လျစ် ဆန်းသစ်သည့် ကဗျာများကိုရေးဖွဲ့ သည့် ကဗျာဆရာများကိုမူ “မော်ဒန်ကဗျာဆရာများ”ဟု ခေါ်တွင်ခဲ့ကြ ဖူးလေသည်။
ဖော်ဝေး သည် မော်ဒန်ကဗျာဆရာအုပ်စုထဲတွင် ပါဝင်သွားခဲ့၏။ ပါဝင်သည်ဟုဆိုသည်ထက် မော်ဒန်ကဗျာဆရာအုပ်စု၏ ခေါင်းဆောင်တဦးအဖြစ်ပင်လျှင် ယူဆပြောဆိုခြင်း ခံရသူပင်ဖြစ်၏။ ကဗျာဆရာ အောင်ချိမ့်၊ မောင်ချောနွယ်၊ သုခမိန်လှိုင် တို့ နှင့် တတွဲတည်းဖြစ်၏။ ကျနော်တို့ သည် ထိုစဉ်က ဖော်ဝေးနှင့် အချိန်ပြည့်တွဲကာ ဆံပင်ရှည်ရှည် ညစ်တီးညစ်ပတ် နေထိုင်ကြသည့် အောင်ချိမ့်၊ မောင်ချောနွယ်တို့ ၏ နေထိုင်ဝတ်စားပုံကိုကြည့်ကာ သူတို့ ကဗျာများကိုမူ အလေးအနက် မထားမိခဲ့ကြ။သူတို့အုပ်စုကို “မတ်က်စ်ဝါဒ”မှ သွေဖီသည့် တကိုယ်တော်ထွက်ပေါက်ရှာသူ “အိပ်ဇစ်”များအဖြစ် ယူဆကာရှုံ့ချခဲ့ကြဖူး၏။
ကျနော်တို့ ၏ သူငယ်နာမစင်သော အယူအဆကို ဆရာဒဂုန်တာရာသည် မကြာခဏ ပြန်လည်တည့်မတ်ကူညီခဲ့၏။ “အဟောင်းဥခွံမှ ဖောက်ထွက်ရန်ကြိုးစားသူ မည်သူမဆို ကိုယ့်စည်းအတွင်းမှ လူများသာဖြစ်သည်” ဟူသော ပေတံဖြင့် တိုင်းတာ တတ်ရန်ကို သတိပေးနှိုးဆော်ခဲ့၏။
နောင်နှစ်(၂၀)နီးပါးကြာသောအခါ ထိုစဉ်က ကျနော်တို့ က ပြည်သူ့ စာပေလမ်းကြောင်းပေါ်မှ သွေဖီသူများဟုယူဆထား ခဲ့သည့် ဖော်ဝေး၊ အောင်ချိမ့်၊ မောင်ချောနွယ်တို့ မှာ မြန်မာခေတ်ပေါ်ကဗျာသမိုင်းတွင် အထင်ကရ ကဗျာဆရာများ ဖြစ်လာခဲ့ကြတော့သည်။
ဖော်ဝေးသည် “မတ်က်စ်ဝါဒ” ကို ယုံကြည်သူဖြစ်သည်။ ၁၉၇၄ ခုနှစ်တွင်ရေးခဲ့သည့် သူ၏ဒိုင်ယာယီတွင် အတိအလင်းဝန်ခံ ရေးသားခဲ့ပါသည်။ သို့ သော် မတ်က်စ်ဝါဒ အပေါ် မျက်စိမှိတ်ပြီးမှ ယုံကြည်ခဲ့သူတဦးတော့ မဟုတ်ချေ။ သူသည် မတ်က်စ်
၀ါဒကို ဝေဖန်ဆန်းစစ်ပြီးမှ သက်ဝင်ယုံကြည်လိုသူဖြစ်၏။ အထူးသဖြင့် မတ်က်စ်ဝါဒကို ခြေစုံပစ်ပြီး အားထားယုံကြည်သူ တဦးအဖို့ မတ်က်စ်ဝါဒ၏ အဘိဓမ္မာရေးအရ အမှားအယွင်းရှိခဲ့သည်ရှိသော် ဆိုသည့် အတွေးကြောင့် ဖော်ဝေးသည် တစုံတရာအားဖြင့် တုန်လှုပ်ခြောက်ခြားနေခဲ့ဖူးသည်ဟု ပြောနိူင်၏။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် မတ်က်စ်ဝါဒကို သက်ဝင်ယုံကြည်ပါသည်ဟု အတိအလင်း ၀န်ခံထားသူ ဖော်ဝေးသည် မတ်က်စ်
၀ါဒကို အဘိဓမ္မာရေးအရ ဝေဖန် သည့်ကဗျာတပုဒ်ကို ရေးဖွဲ့ ခဲ့သူဖြစ်၏။ သည် ကဗျာတပုဒ်သည်ပင်လျှင် ဖော်ဝေးသည် မတ်က်စ်ဝါဒကို ထိုခေတ်က လူငယ်တချို ကဲ့သို့ လှေနံ ဓါးထစ် စိတ်ချယုံကြည်စွာ လက်ခံသူ မဟုတ်ကြောင်း ဖော်ပြလေသည်။
ဖော်ဝေးသည် ၁၉၇၂ ခု မေလထုတ် မိုးဝေစာပေမဂ္ဂဇင်းတွင် “ရေလယ်မီးပြ ” ကဗျာကို ရေးဖွဲ့ ပြီး မတ်က်စ်ဝါဒကို ဝေဖန် ဆန်းစစ်ခဲ့လေသည်။
ခု ငိုမယ်၊ ခု ရယ်မယ်
မှန်းဆဖို့မလွယ်ပါဘူး။
သောင်က ဟိုရှေ့ 
အကွေ့ဒီမှာ
ဘယ်အဆွယ် ဘယ်အကွေ့ 
ဘယ်ရွေ့ဘယ်မျှ
မိုးဝေ၊ ၁၉၇၂၊ မေလ
“ရေလယ်မီးပြ” ကဗျာတွင် “မီးနီရွှန်းပြက်၊ တလက်လက်နဲ့၊ လက်ညှိုးညွှန်တယ်၊ ရေလယ်မီးပြ၊ ကျေးဇူးတင်စရာ…” ကဗျာ ပိုဒ်နှင့် “အနီရောင်တလက်လက်နဲ့၊ မီးပြများ ပျက်တဲ့အခါ” ကဗျာပိုဒ်များမှာသည် ကဗျာ၏အရေးပါလှသည့် ကဗျာပိုဒ် များဖြစ်လေ သည်။
၁၉၇၀ ခုနှစ်တ၀ိုက်က မိုးဝေကဗျာဆရာအများစုသည် တော်လှန်ရေးနှင့် လက်ဝဲ၀ါဒ အခြေခံသည့် အယူအဆကို “အနီရောင်”ဖြင့် ထင်ဟပ်ဖေါ်ပြလေ့ရှိကြ၏။ ဥပမာ “ကြယ်နီ” “ကောင်းကင်နီ” “နေ၀န်းနီ” “နှင်းဆီနီ” အစရှိသဖြင့် “အနီရောင်” ကို အဘိဓမ္မာ ကိုယ်စားပြု သင်္ကေတအဖြစ် အသုံးပြုခဲ့ကြ၏။ ထို့ ကြောင့် ယင်းကဗျာပိုဒ်များတွင် ပါရှိသည့် “မီးနီရွှန်းပြက်” ဟူသော စကားစုနှင့် “အနီရောင်တလက်လက်နဲ့” ဟူသောစကားစုတို့ မှာ “မတ်က်စ်ဝါဒ”ကို ရည်ညွှန်းသည့် စကားစုများအဖြစ် ယူဆလို့ ရနိူင်သည့် “သင်္ကေတစကားစုများ” ဖြစ်လေသည်။
“ရေလယ်မီးပြ ” ကဗျာ၏ အဓိကဆိုလိုရင်း အဓိပါယ်မှာ ပင်လယ်ပြင်တွင် သဘောင်္များအဖို့ညအမှောင်ကာလတွင် မီးပြတိုက်၏ သတိပေးလမ်းညွှန်ချက်ကြောင့် အန္တရာယ်ဟူသမျှ ရှောင်ရှားသွားလာ၍ ရနိူင်ကြောင်း၊ သို့ သော် ထိုလမ်းညွှန် အချက်ပြသည့် မီးပြက တခါတလေမှာ ပျက်နေပြီဆိုလျင်တော့ သင်္ဘောများသည် ကျောက်ဆောင်နှင့် မတိုက်မိဘဲ မီးပြနှင့်ပဲတိုက်မိပြီး သင်္ဘော မှောက်တာမျိုးကို ကြုံရတတ်သည့် အကြောင်း ရေးဖွဲ့ ထားခြင်းဖြစ်သည်။ သည်အဓိပါယ်ကို တိုက်ရိုက်ကိုယ်စားပြုသည့်ကဗျာ ပိုဒ်မှာ အောက်ပါနောက်ဆုံးကဗျာပိုဒ်ဖြစ်လေသည်။
မီးပြနဲ့တိုက်တာကြောင့်
ကဗျာ၏ဆိုလိုရင်း အနှစ်ချုပ်မှာ “မတ်က်စ်ဝါဒ”သည် တိုက်ပွဲလမ်းညွှန်ဝါဒတခုဖြစ်သည် မှန်ပင် မှန်သော်ငြားလည်း “မတ်က်စ်ဝါဒ” တွင် အမှားတခုခုရှိခဲ့လျှင် ယင်းလမ်းညွှန်ဝါဒရဲ့ လမ်းညွှန်အမှားကြောင့်ပင်လျှင် လူတွေဒုက္ခရောက် နိူင်ကြောင်း ရေးဖွဲ့ ပြောဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။
ထို့ ကြောင့် “ဖော်ဝေး” ၏ “ရေလယ်မီးပြ ”ကဗျာသည် အဘိဓမ္မာဝေဖန်ရေးကဗျာဖြစ်သည် ဆိုသည်မှာ ငြင်း၍့ မရနိုင်ပါ။
ဖော်ဝေးသည် မတ်က်စ်ဝါဒ ကို သက်ဝင်ယုံကြည်သူဖြစ်သည် ဆိုသည်မှာမှန်၏။ သို့ သော်လည်း ဖော်ဝေးသည် မတ်က်စ် ၀ါဒ ကို မျက်စိစုံမှိတ်ပြီးမှ သက်ဝင်ယုံကြည်ခဲ့သူ မဟုတ်သည်ကိုမူ “ရေလယ်မီးပြ” ကဗျာက ငြင်းမရအောင် သက်သေ ထူလျှက်ရှိလေသည်။ ။
မောင်သစ်ဦး | ဇွန် ၂၅၊ ၂၀၀၇
Posted by Myo Tayzar Maung at 7:56 AM No comments: Links to this post
Labels: ရသလွင်ပြင် IRRAWADY
Posted by Myo Tayzar Maung at 9:16 PM No comments: Links to this post
Labels: from drlunswe.blogspot.com(poem and picture0
အဲဒီ ပင်လယ်ပေါ် ဟန်းနီးမွန်းထွက်ကြမလို.တဲ.
(၂) လိပ်ပြာတောင်ပံထဲက ကျန်ခဲရစ်ခဲ.တဲ.ပန်းဝတ်မှုန်
(၃) စုတ်ချက်တွေနဲ. ခုတ်ထစ်ထားတဲ.ကျူဗစ်ဇင်ပန်းချီကား
Posted by Myo Tayzar Maung at 9:06 PM No comments: Links to this post
သွားပွတ်တံတစ်ချောင်း ၊ ဆပ်ပြာခဲတစ်ခဲ…..
ရုပ်ရှင်ကပြီးပြီ ၊ ဖလင်တွေကလည်နေတုန်း ။
Posted by Myo Tayzar Maung at 10:02 PM No comments: Links to this post
မလင်းပြာ ၂မလင်းပြာငါ အီရတ်ကို သွားရမယ်။အဲဒီမှာမဟာ...
BETWEEN LIFE & DEATH OF A POETIC CREATURE
Pyinmana, Mandalay Division, Myanmar (Burma)
Myo Tayzar Maung(1983- ) born on 17 March 1983 in Pyinmana, Myanmar began making friend with poetry since 1999 consider myselfapoet andapoetics scholar graduated BA Degree in English Literature in 2005 now living in Pyinmana believe in"Poems are essential to human beings. We can't live without them."